Iwe unowanzo gamuchira notices dzisingadiwe kubva kuGetApps pane yako Xiaomi foni? Kana iwe uine foni inomhanya MIUI, mikana ndeyekuti iwe unogona kuwana zviyeuchidzo zve spam zvakadai se "Tora maficha matsva, gadziridza izvozvi," ichikumbira kuti iwe uise kana kugadzirisa mapurogiramu pafoni yako. Izvi zvinogona kutsamwisa vanhu vazhinji vasingafarire maapp. Naizvozvo, isu tiri pano nedzimwe nzira dzekukurumidza dze dzima GetApps pane Xiaomi, Redmi, uye Poco mafoni anomhanya MIUI.
Yaimbozivikanwa seMi Picks, Xiaomi GetApps chitoro chepamutemo cheapp uko kwaunogona kurodha maapplication efoni yako Xiaomi. Nekudaro, sezvo isu tatova neGoogle Play Store, iri nani uye yakachena, vazhinji venyu mungangoda kubvisa GetApps.
Dambudziko reGetApps nderekuti rinoramba richigogodza nemawisi anogumbura. Ichakutumira iwe zviziviso, uchikumbira kuti uvandudze maapps pafoni yako. Nekudaro, mazhinji eaya maapps haana kana kuiswa pafoni pakutanga. Nekudaro, muchidimbu, inokuparadzira kunze kwekunge iwe waisa maapplication aanoda kuti ushandise pafoni yako.
Nehurombo, Xiaomi haibvumire iwe kudzima GetApps mune zvigadzikiso- isu hatina kukwanisa kuwana sarudzo. Asi, isu tine mashoma ekushandira anogona kukubatsira kubvisa zvinogumbura GetApps ziviso pane yako Xiaomi, Redmi, kana Poco foni inomhanya MIUI. Verenga pamusoro.
MIUI haipe iyo sarudzo yekudzima GetApps. Nekudaro, zvinokutendera kuti ubvise zviziviso zvakafanana, zvinotevera:
Open Settings pane yako Xiaomi, Redmi, kana Poco foni.
Enda ku Zvirongwa> Manage Apps.
Pano, tsvaga Wana Mapurogiramu. Dzvanya.
Pachirongwa chinotevera, tinya Notifications.
Wobva wadzima iyo toggle yekudzima zvese zviziviso kubva kuGetApps.
Unogona kuwedzera kumanikidza kumisa iyo app uye kujekesa data rayo.
Dzima GetApps kuburikidza nePC (uchishandisa ADB)
Kuti ubvise GetApps zvachose kubva kune yako Xiaomi foni, unogona kushandisa ADB mirairo yatinowanzo shandisa kubvisa bloatware kubva kuApple mafoni. Pazasi pane nhanho-nhanho maitiro ekubvisa GetApps uchishandisa ADB pakombuta yako.
Nhanho 1- Pre-Zvinodiwa
Dhawunirodha iyo ADB yePC yako (Windows, Mac, Linux). Bvisa iyo zip faira pane yako drive.
Pafoni yako, ita Zvokushandura Maitiro. Kuti uzviite, enda kuZvirongwa> Nezvekushandisa, tinya MIUI Shanduro kanomwe kusvikira waona "Sarudzo dzekuvandudza dzabvumidzwa."
Mushure meizvozvo, enda ku Zvimwe Zvirongwa> Ongororo Dzemusimudziri.
Pano, batidza USB Debugging.
Nhanho 2- Unganidza Runhare kuburikidza neADB
Unganidza yako Xiaomi foni kuPC yako uchishandisa tambo ye USB.
Chinja kuwanikwa kweFilm Transfer kubva pane sarudzo mune iyo ziviso pane.
Simbisa paunokumbirwa kubvumidza USB debugging kupinda pafoni yako.
Nhanho 3- Bvisa GetApps uchishandisa ADB Mirairo
Vhura Command Prompt pakombuta yako. KANA enda kufolda yeADB, tinya Shift + Kurudyi-Dzvanya > Vhura PowerShell Window, kana Vhura Command Kukurumidza Pano.
Nyora wopinda "adb device”Kutarisa kana mudziyo wacho wakabatana.
Ipapo, pinda "adb deko. "
Isa mutemo unotevera: “Pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.mipicks"
Ndizvo. GetApps iko zvino ichabviswa zvachose kubva kune yako Xiaomi foni, uye iwe hauchade kunetseka nezve izvo zvinosemesa zviziviso. Nekudaro, kana iwe uchida kudzoreredza iyo app mune ramangwana, unogona kuzviita nekushandisa rairo "adb shell cmd package yekuisa-iripo com.xiaomi.mipicks."
Kuti uwane mamwe maitiro, tarisa gwara redu pane kubvisa maapplication esisitimu kubva kuApple isina mudzi.
3. Uchishandisa Debloater Turu paPC
Debloater chishandiso chinoshandiswa kubvisa bloatware maapplication kubva kuApple zvishandiso. Inoshanda yakafanana neiyo ADB nzira inokurukurwa pamusoro- unogona kuishandisa kana ADB ichiita kunge yakanyanya kukuomera.
Enable USB debugging inogoneswa pane yako kifaa kana zvisiri izvo.
Zvino, tora iyo Chishandiso cheDebloater uye kuisa paPC yako.
Vhura chishandiso uye ubatanidze foni uchishandisa tambo ye USB kune komputa yako. Ndokumbira umirire kuti itore mudziyo wako.
Zvino, tinya pa "Verenga Runhare Mapakeji”Kuti uone runyorwa rweese maapplication akaiswa pane chako kifaa.
Tinya kaviri paGetApps (com.xiaomi.mipicks) uye tinya iyo Shandisa bhatani.
Ndizvo; iyo yakatakurwa GetApps zvino ichave yakabviswa kubva kune yako Xiaomi, Redmi, kana Poco foni. Senzira yekutanga, iyi inodzosera maitiro, uye unogona kudzosera maapplication asina kubviswa chero nguva yaunoda.
Neimwe nzira, iwe unogona zvakare kushandisa MIUI Global Debloater Turu yekubvisa iyo bloatware maapplication kubva kune yako Xiaomi foni.
Kuputira Kumusoro- Bvisa GetApps muMIUI
Izvi zvaive zvese nezve mabviro aunogona kubvisa uye kudzima GetApps ziviso pane yako Xiaomi, Redmi, kana Poco foni. Izvi zvinokubatsira iwe kubvisa zvisingadiwe zveapuro ekuvandudza zviziviso muMIUI. Iwe unogona zvakare kushandisa nzira dzataurwa pamusoro apa kubvisa mamwe ma bloatware maapplication kubva kune yako Xiaomi chishandiso.
POCO M2 Pro Ongororo - Yakanatsiridzwa Redmi Cherekedza 9 Pro